ISenda Viva, ipaki enkulu yomndeni enkulu kunazo zonke eSpain | Izindaba Zokuhamba
ISenda Viva, ipaki enkulu yomndeni enkulu kunazo zonke eSpain
Isithombe | Indlela Yokuphila
Eceleni kweBárdenas Reales kuneSenda Viva, ipaki elinikezelwe ezokungcebeleka komndeni elaziwa njengelikhulu kunayo yonke eNhlonhlweni Yase-Iberia. Ukuhlanganiswa okungavamile kwepaki lokuzijabulisa, i-zoo kanye nemisebenzi ethandwa ngabancane nabadala. Awungeke ulahlekelwe yilokhu!
1 Itholakala kuphi?
2 Ukususwa eceleni kweSenda Viva
3 Injani ipaki iSenda Viva?
4 Izikhangibavakashi zeSenda Viva
5 Umndeni wezilwane zikaSenda Viva
6 Intengo yamathikithi
7 Imininingwane enentshisekelo kuSenda Viva
8 Amahora eSenda Viva
ISenda Viva isogwini lwaseNavarrese, eduze kwaseBardenas Reales Natural Park (yamenyezelwa njenge-Biosphere Reserve yi-UNESCO) namakhilomitha angama-80 eningizimu yePamplona. Ngamahektha ayo angama-120 wokunweba, sibhekene nepaki enkulu yomndeni enkulu kunazo zonke eSpain
Ukungena eSenda Viva kufanele ukwenze ngomgwaqo, ikakhulukazi ngokuthatha umgwaqo iVirgen del Yugo s / n, 31513 Arguedas, kungaba ngemoto yangasese noma ngokuqasha insizakalo yezokuthutha yesikhala ikakhulukazi ngenkathi ephezulu, elanda isivakashi emnyango wendawo yokuhlala lapho behlala khona ibashiye ekungeneni okufanayo. Lokhu kukuvumela ukuthi wonge ukuhamba okuncane okufanele ukwenze ngokuhamba ngemoto yangasese.
Makungabikho muntu othukayo! Le ndlela encane igandayiwe futhi ikuvumela ukuthi uthathe uhambo olumnandi ucabanga ngokuzungezile. Kodwa-ke, ukuthatha izingane ezincane kungaba yinde kancane, ikakhulukazi lapho usubuyela emuva lapho sezivele zikhathele kusukela osukwini olude zijabulela iSenda Viva.
Ukususwa eceleni kweSenda Viva
Uma sesingaphakathi kwepaki iSenda Viva, isivakashi singahamba ngezinyawo noma sisebenzise izinhlobo ezahlukene zokuhamba njengama-trailer noma isitimela esincane. Empeleni, imvamisa yalokhu kuthutha cishe imizuzu engama-25 yize kuncike ekuthutheleleni kwabantu.
Injani ipaki iSenda Viva?
Uhambo oluhambisana neSenda Viva luhlukaniswe izindawo ezine: Ipulazi, iHlathi, iDolobha kanye neFair. Lapho nje singena endaweni ebiyelweyo sithola iDolobha okuyindawo yokuqala yomzila. Lapha kukhona indawo yolwazi, izakhi namalokhi, izindawo zokuqasha izihlalo zabantwana nezihlalo ezinamasondo, isitolo sezikhumbuzo, ihostela, isibaya sezinkabi nesithabathaba somuzi, indlu ethusayo ehlala abalingiswa abangajwayelekile.
Uma sihamba ngeNdlela Yezinkomo sibheke eFair, singahlangana nezinhlobo ezifana namahhashi eBurguete, izimvu ze-latxa, izinkomo zasePyrenean noma izinkabi. Uma sesitholakala kule ndawo yepaki, asikwazi ukuphuthelwa yizinto ezikhangayo ezinjenge-maze yamanzi, isekisi elinomoya opholile, i-merry-go-round, amabhampa noma izibuko ezihlekisayo. Ukuthatha ikhefu, akukho okungcono kunokuya kumthamo wechibi noma i-brasserie yombukiso. Ngemuva kwalokho, ungaqhubeka nokuhambela ucabanga ngezinkawu ze-capuchin noma ama-jaguar. Kuyahlaba umxhwele!
Siyaqhubeka nokuya ehlathini lapho amadube, izintshe, izimpisi noma amahlosi kuyizimbangi eziyinhloko. Lapha uzothola nokuheha kokuwa kwamahhala nenkundla yokudlala yezingane. Inenye futhi indawo yokudlela ebizwa nge-El Balcón de la Bardena nombono ongamangala ngawo ngokubuka okumangazayo kweBardenas Reales Natural Park.
Ekugcineni, ePulazini kukhona i-aviary eyi-1.100 m2, ipulazi elincane kanye nombukiso wendiza ye-raptor. Ngaphezu kwalokho, lapha kukhona insiza yokuzenzela ebizwa ngeLa Recoleta yokuthola isidlo esisheshayo.
Izikhangibavakashi zeSenda Viva
ISenda Viva Park inezikhangiso ezingaphezu kwezingamashumi amathathu zazo zonke izethameli, phakathi kwazo kukhona: iBobsleigh (ithrekhi ende yama-sledding); I-Valhalla (ukugibela ngokoqobo kwama-roller coasters); iThubing eqondile (lapho isivakashi sehla khona emthambekeni wamamitha angama-300 namamitha angama-60 wokungalingani ngeflothi elikhulu) noma i-Great Zip-line, ingena kwabanye.
Isithombe | Ihhotela iSenda Viva
Umndeni wezilwane zikaSenda Viva
Leli paki selivele linezilwane ezingaphezu kwezingu-800 zezinhlobo ezingama-200 ezinjengamabhere ansundu, ama-otter, amabhubesi, ama-kangaroo asodongeni kanye namahlosi ambalwa amhlophe. ISenda Viva iyaqhubeka nokubamba iqhaza ezinhlelweni zokongiwa kwezinhlobo zomdabu ezisengozini yokuqothulwa njengeNavarrese jackfruit, izinkomo ze-betizus noma amahhashi e-burguete.
Ithikithi labantu abadala eSenda Viva linenani lama-euro angama-28 ebhokisini lehhovisi kanye nama-euro angama-25 online Ngenkathi ithikithi lezingane, kuze kube yiminyaka eyi-11, kanye nalabo asebethathe umhlalaphansi ngama-euro angama-21 ebhokisini lehhovisi kanye nama-euro angama-18 online. Izingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ubudala zikhululekile. Njengokulangazelela, usuku lwesibili lokuvakashela ipaki leSenda Viva umnyango ubiza uhhafu.
Imininingwane enentshisekelo kuSenda Viva
Ipaki yenzelwa izingane ezincane kepha zonke izinto ezikhangayo zinobude obuncane obudingekayo. Zingabekwa ezintweni eziningi, yebo, zihambisane nezimbalwa.
Isiphuzo noma ukudla akuvunyelwe njengoba kunezindawo zokudlela eziningana eSenda Viva lapho ungama khona ukuze udle noma uphumule. Kodwa-ke, kunemithombo yamanzi okuphuza yonke indawo.
Uma uvakashela iSenda Viva entwasahlobo noma ehlobo, kungakuhle ukuthi ulethe isigqoko, i-sunscreen ... ngoba kuyashisa impela.
Kukhona i-Wi-Fi kuyo yonke ipaki.
Amahora eSenda Viva
Kuze kube ngoNovemba 4: NgoMgqibelo nangeSonto kusukela ngo-11: 00 ekuseni kuya ku-20: 00 ntambama
I-El Pilar Bridge: kusukela ngo-Okthoba 12 kuya ku-14, kusukela ngo-11: 00 ekuseni kuya ku-20: 00 ntambama
Ibhuloho likaNovemba: kusuka ngoNovemba 1 kuya ku-4, kusuka ku-11: 00 ekuseni kuya ku-20: 00 pm
Kusukela ngoNovemba 5: kuvaliwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » ISenda Viva, ipaki enkulu yomndeni enkulu kunazo zonke eSpain
Uhambo oluya eVictoria Falls enhle
I-Camperized van, umqondo omuhle wokuhamba